युगसम्बाद साप्ताहिक - ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’को नारा प्रगति बिरोधी ! - यादब देवकोटा
Thursday, 04.09.2020, 09:24pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 10.15.2019, 11:44am (GMT+5.5)
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दशैं लगाउने–खानेमाा सीमित रहेको पर्व हैन । दशैं केवल मानिसहरुले मनोरञ्जन गर्ने पर्व मात्र हैन संस्कृति, स्नेह, मेलमिलाप र प्रकृतिसंग सम्बन्धित छ । यति मात्र हैन यो पर्व मातृशक्तिको महिमाको गुणगान गाउने, मातृशक्तिप्रति नतमस्तक भएर नौदिनसम्म आराधना गर्ने पर्व हो । आजभोलि महिला समानताको नारा घन्काउनेहरुले दशैंले स्थापित गरेको मान्यता मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने हो भने नेपाल संसारमै सबभन्दा उत्कृष्ट मुलुक ठहरिनेछ ।
तर दशैं लगायतका पर्वहरु रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै वामपन्थी नेता तथा विश्लेषकहरु धुमधामसंग दशैं मनाउँछन् । उनीहरु हिन्दु धर्म संस्कृतिले समाज विकासमा अबरोध पु¥यायो भन्दै हिन्दु धर्म त्याग्न खुला आव्हान गर्छन् । जातीय भेदभाव हिन्दु धर्मले गरेको भन्दै एकजनता पूर्व प्रधानमन्त्रीले त कथित दलित जातिलाई किन हिन्दुधर्म मान्नुहून्छ भन्दै धर्म त्याग्न खुला आव्हान गरे । के यसरी देश विकास हुन्छ त ? धर्म, संस्कृति, संस्कार र रितीरिवाज रुपान्तरण वा परिवर्तन गरेर कुन देशले विकास गरेको छ ? देखाइदिनुप¥यो ।
हिन्दु धर्मले अनुप्राणित परिवारमा जन्मने, त्यही धर्म अनुसार नामाकरण, शिक्षा, विवाह सबै गर्ने अनि जान्नेसुन्ने भएपछि अरुको लहलहैमा लागेर केही धनका लागि धर्म परिवर्तन गरेर हिन्दु धर्ममाथ विषवमन गर्नेहरु यही धर्मको आडमा सामाजिक कामका लागि लगाइएको महापुराण वा महायज्ञमा दुबोको मालामा बेहुला झैं सजिएर हिन्दु धर्मको गुणगान गाउन भने बिर्सदैनन् । तैपनि उनीहरु भन्छन् “हिन्दु धर्मले विकासमा अबरोध ग¥यो” !
हिन्दुधर्म कसरी विकास बिरोधी भयो ? इतिहास साक्षी छ पूर्वीय सभ्यता नै संसारको पहिलो सभ्यता हो ? साम्यवादको सुरुवात ५ हजार वर्षअघि नै सुरु भएको थियो । महाभारतकालिन समय नै साम्यवादी थियो । रामायणकाल सबभन्दा सफल लोकतन्त्र थियो । जनताको झुठा आरोपलाई पनि स्वीकारेर राजा रामले रानी सीता त्यागेको दृष्टान्त लोकमतको सम्मान हो ? आज भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गनाएर जनताले मात्र हैन अदालतले संवैधानिका निकायले नै दोषी देखाए पनि कारबाहीको कुनै गुञ्जायस छैन । हिन्दु धर्म–संस्कृतिमा लोकतन्त्र–साम्यवाद थियो भने अहिले पश्चिमा लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा कस्तो छ ? शक्तिको आडमा महिला बलात्कार गर्नेहरु कानुनबाट बच्न शक्तिको प्रयोग गर्छन् । अनि उनीहरु नै भन्छन् हिन्दु धर्म विकासबिरोधी छ ।
हिन्दुधर्म व्यक्तिगत स्वार्थको बिरोधी छ । यस अन्तर्गतका चाडपर्वहरु सामाजिक सद्भाव, प्रकृति संरक्षण र जीवन–जगतसंग सम्बन्धित छ । यस्तै पर्वमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण पर्व हो दशैं जो सामाजिक–सांस्कृतिक–पारिवारिक पर्व हो । अहिलेको जस्तो मांस–मदिरा–जुवाको होडवाजी दशैंको संस्कृति हैन । यसको तात्विक विशेषताको अध्ययन नै नगरी दशैंमाथि विषवमन गरेर आफ्नो विद्वता छाट्ने नेताहरुले धर्म परिवर्तन गरेकै भरमा हिन्दु धर्मका मूल्य–मान्यताहरु रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्नु बाहेक केही हैन ।
दशैंको नौ दिनको महत्व जीवन र जगतसंग सम्बन्धित छ । विश्वशान्तिसंग जोडिएको छ । अनि मानवअधिकार, समानता र सद्भावको अर्को ज्वलन्त महिमा छ । विश्वमै दशैं मात्र यस्तो एउटा पर्व हो जहाँ मातृशक्तिको उपासना गरिन्छ जसबाट ज्ञान, धन र शक्ति प्राप्त हुन्छ । यिनै मातृशक्तिको उपासना गरेर जीवनलाई गतिशील बनाउन उर्जा प्राप्त गर्ने र परिवार, समाज र छर–छिमेकमा सद्भाव शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै आनन्दले रमाउने दशैं पर्वको दशौं दिन अर्थात् विजया दशमीको विशेष महत्व छ ।
टीका लगाई आशीर्वाद दिने र संयुक्त पारिवारिक संस्कृतिको भावनालाई जीवन्त बनाउने यो दिन घटस्थापानको दिन स्थापित कलशको जलले अभिषेक गर्दै देवी विसर्जनका कर्म पूरा गरिन्छन् । आ–आफ्ना कूलाचार, परम्पराको पृष्ठभूमिमा पहेला जमरा र राता अक्षता निधारमा लगाएर सकारात्मक मानसिकतामा रमाउँदै प्रशन्न हुने गरिन्छ । यही दशैं प्रगतिशील भएन, यही दशैं लगायतका पर्वहरुको मान्यता स्थापित गर्ने हिन्दु धर्म प्रगतिशील भएन भन्नेहरुले प्रगति र उन्नतिको परिभाषा पनि दिने हो कि ?
नेताहरु भन्छन्– हिन्दु धर्म प्रगतिशील भएन अरु धर्मजस्तो । उनीहरुले भनिदिनुप¥यो इसाई धर्मले कस्तो विकास ग¥यो ? के भौतिक विकास मात्रै सबथोक हो ? मुसाई धर्मले के सिर्जना ग¥यो ? इसाई धर्मावलम्बीहरु एक हातमा रोटी र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर धर्म परिवर्तन गराउँदै हिंड्छन् । आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि उनीहरु आतंकवादी जनमाउँछनु, उसलाई पालन–पोषण गर्छन् र अन्ततः उसको काम सकिएपछि उसैलाई सिध्याउँछन् । इराकका सद्दाम हुसेन हुन् वा आतंकवादी नेता ओसामा विन लादेन– अमेरिकी उत्पादन हुन् र अन्ततः अमेरिकाकै लागि खतरा बने र अमेरिकाले आज इराक र अफगादिस्तानमा कहिल्यै ननिभ्ने आगो सल्काएको छ ।
नेताहरुले भनेजस्तो प्रगतिशीलता यही हो ? ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को मान्यता राख्ने हिन्दु धर्म विकास बिरोधी अनि अर्कोलाई मारेर आफू बाँच भन्ने अरु धर्म प्रगतिशील देख्ने नेता, विद्वान र विश्लेषकहरुको बिवेकमा डलरको बिर्कोले डाकिएपछि योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?